မာလခိ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / မာလခိ
1:2 ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, သငျတို့သပြောဆိုကြပြီ, "အဘယ်သို့သောလမ်းများတွင်သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကိုချစ်ကြ?"ယာကုပ်အားဧသောအစ်ကိုမဟုတ်ခဲ့, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ? ထိုအခါငါယာကုပ်ကိုချစ်ကြပြီမဟုတ်,
1:3 ဧသောကိုအဘို့အမုန်းတီးမှုကျင်းပ? ထိုအခါငါအထီးထီးနေခြင်း၌သူ၏တောင်များခန့်ထားပြီ, နှင့်သဲကန္တာရ၏မြွေနှင့်အတူသူ၏အမွေဥစ္စာ.
1:4 သို့သော် Idumea ဟုဆိုလိမ့်မည်ဆိုပါက, "ကျနော်တို့ကဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပြန်လာသည့်အခါ, ကျနော်တို့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီးအဘယ်အရာကိုတက်ဘို့တည်ဆောက်ကြမည်,"ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: သူတို့ကထညျဆောကျမညျ, ငါဖျက်ဆီးမည်. ထိုသူတို့က "impiety ၏ကန့်သတ်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်,"နှင့်, "သခင်အမျက်ထွက်ခဲ့ဘယ်သူကိုနှင့်အတူလူ, ပင်ထာဖြစ်ပါတယ်။ "
1:5 နှင့်သင့်မျက်စိမြင်ရပါလိမ့်မည်. တဖန်သင်တို့ဆိုလိမ့်မည်, "သခင်ဣသရေလအမျိုး၏ကန့်သတ်ထက်ကျော်လွန်ကိုချီးမြှင့်ခံရပါစေသော။ "
1:6 အဆိုပါသားသည်အဘကိုရိုသေ, နှင့်ကျွန်သည်မိမိသခင်. အကယ်., ထိုကွောငျ့, ငါခမညျးတျောဖွစျပါ၏, ကြှနျတေျာ့ဂုဏ်အသရေသည်အဘယ်မှာရှိ? ထိုအခါငါမာစတာဖြစ်ကြောင်းကိုလျှင်, ကြှနျတေျာ့ကိုကွောကျရှံ့သည်အဘယ်မှာရှိ? ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသည်သင့်အားမိန့်တော်မူ၏, အိုယဇ်ပုရောဟိတ်, ငါ့နာမကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသော. တဖန်သင်တို့ပြောဆိုကြပြီ, "ဘယ်လိုနည်းနဲ့, ငါတို့သည်သင်တို့၏နာမကိုအမှီမထီမဲ့မွငျပွုပါပွီ?"
1:7 သင်သည်ငါ၏ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းမုန့်ကိုကမ်းလှမ်း, သငျတို့သလို့ပြော, "ဘယ်လိုနည်းနဲ့, ငါတို့သည်သင်တို့ညစ်ညူးကြပါပြီ?"အဲဒီခုနှစ်တွင်သင်ပြော, "သခင်၏စားပွဲမထီမဲ့မွငျပွုခဲ့သညျ။ "
1:8 သငျသညျယဇျပူဇျောများအတွက်မျက်စိကန်းသောပူဇော်လိုလျှင်, ဤဆိုးသောမဟုတ်ပါ? သင်ခြေဆွံ့သောသူနှင့်နေမကောင်းပူဇော်လျှင်, ဤဆိုးသောမဟုတ်ပါ? သင့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကမပူဇော်, သူကအလိုရှိပါလိမ့်မည်ဆိုပါက, သို့မဟုတ်သူသည်သင်၏မျက်နှာကိုလက်ခံကြလိမ့်မည်ဆိုပါက, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
1:9 နှင့်ယခု, ဘုရားသခငျ၏မကျြနှာကိုတောင်းပန်သွေးဆောင်ပါ၏, သူသည်သင်တို့ကိုမသနားတျောမူစေခြင်းငှါဒါ (သင်၏လက်ကိုအားဖြင့်အဘို့ဤအမှုကိုပြုသောထားပြီး) လျှင်, မည်သည့်လမ်းအတွက်, သူသည်သင်၏မျက်နှာများကိုလက်ခံစေခြင်းငှါ,, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
1:10 တံခါးပိတ်လိုက်ပြီးလစာမပါဘဲငါ့ယဇ်ပလ္လင် enflame မယ်လို့သင်တို့တွင်အဘယ်သူရှိ? ငါသည်သင်တို့ကိုမကျြနှာသာရှိ, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏. ငါသည်လည်းသင်တို့၏လက်မှလက်ဆောင်ကိုလက်ခံမည်မဟုတ်.
1:11 အကြောင်းမူကား,, ယင်းကိုပင်၎င်း၏ setting ကိုမှနေထွက်ရာကနေ, ငါ့နာမကိုတပါးအမျိုးသားတို့သည်ကြီး, သည်အရပ်ဌာန၌, စင်ကြယ်သောပူဇော်သက္ကာဘို့ယဇ်ပူဇော်ရာနှင့်ငါ့နာမကိုအမှီကမ်းလှမ်းနေပါသည်. ငါ့နာမသည်တပါးအမျိုးသားတို့သည်ကြီး, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
1:12 တဖန်သင်တို့ကညစျညူးပါပြီ, သောသငျသညျဆိုသညျကား, "သခင်၏စားပွဲညစ်ညမ်းလျက်ရှိသည်; ထိုသို့ပေါ်မှာနေရာချစသောယုတ်မာသောဖြစ်ပါသည်, ကမျိုသောမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ "
1:13 တဖန်သင်တို့ပြောဆိုကြပြီ, "ငါတို့ပင်ပန်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းကြည့်ရှု,"နှင့်သင်ကကွာသုံးပါတယ်ပါပြီ, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏. တဖန်သင်တို့ဥစ္စာအားဖြင့်ခြေဆွံ့သောသူကိုယူဆောင်, နှင့်ဖျားနာ, နှင့်လက်ဆောင်အဖြစ်ယူဆောင်. အဘယ်သို့ငါသင်၏လက်ကနေဒီကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ?
1:14 မင်္ဂလာရှိလှည့်ဖြားဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူသည်မိမိသိုးစု၌အထီးရရှိထားသူ, နှင့်, သစ်စာဂတိပွုအောင်သည့်အခါ, သောထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌အားနည်းသောကြောင်းယဇျပူဇျောအတွက်ကမ်းလှမ်း. ငါသည်ကြီးမြတ်သောဘုရင်ဖြစ်၏, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏, ငါ့နာမကိုတပါးအမျိုးသားတို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ပါသည်.
2:1 နှင့်ယခု, အိုယဇ်ပုရောဟိတ်, ဒီ command ကိုသင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
2:2 သငျသညျနားမထောငျဖို့ငြင်းဆန်ပါလိမ့်မယ် အကယ်., သငျတို့သညျစိတျနှလုံးကယူဖို့ငြင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်လျှင်, ငါ၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းလိုသောသကဲ့သို့, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏, ငါသည်သင်တို့အပေါ်သို့ခိုကိုးရာမဲ့ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်, ငါသည်လည်းသင်တို့၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျိန်ဆဲကြလိမ့်မည်; ဟုတ်ကဲ့, သူတို့ကိုငါကျိန်ဆဲမည်. သငျသညျစိတျနှလုံးအဖို့ကမယူကြပြီ.
2:3 အကယ်, ငါသည်သင်တို့ကိုရန်လက်မောင်းထွက်ချမည်, ငါသည်လည်းသင်တို့၏မကျြနှာကိုဖြတ်ပြီးသည်သင်၏အဘို့ဓမ္မ၏မစင်ကိုအရပ်ရပ်ကွဲပြားစေပါလိမ့်မယ်, ထိုသို့သူ့ဟာသူရန်သင့်အားကြာမြင့်မည်.
2:4 ငါသည်သင်ဤပညတ်ကိုစလှေတျသိရကြလိမ့်မည်, ငါ၏ပဋိညာဉ်ကိုလေဝိအမျိုး၌ဖြစ်အံ့သောငှါဒါ, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
2:5 ငါ၏ပဋိညာဉ်ကိုအသက်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက်သူနှင့်အတူရှိ. ငါသည်ထိုသူကိုကွောကျရှံ့သောပေးခဲ့တယ်, သူငါ့ကိုကြောက်ရွံ့ကြ၏, သူသည်လည်းငါ၏နာမတျော၏မကျြနှာကိုမရောက်မီကြောက်.
2:6 တရားသူ၏နှုတ်၌ရှိ၏, နှင့်ဒုစရိုကသူ့နှုတ်ခမ်းပေါ်မတွေ့ရှိခဲ့သည်. သူကငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သမာဓိရှိသည်ငါနှင့်အတူလမ်းလျှောက်, သူဒုစရိုက်မှများစွာသောမငြိမ်း.
2:7 ယဇ်ပုရောဟိတ်၏နှုတ်ခမ်းသည်ပညာအတတ်ကိုစောင့်ရှောက်မည်, သူတို့နှုတ်တော်ထွက်တရားကိုကျင့်ကိုတောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်, သူကကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သောကွောငျ့.
2:8 သင်တို့မူကား, လမ်းမှဆုတ်ခွာခဲ့ကြ, နှင့်ပညတ်တရားကိုသင်တို့အားအတွက်အလွန်များစွာသော scandalized ပါပြီ. သငျသညျလေဝိပဋိညာဉ်တရားကိုပယ်ဖျက်ကြပါပြီ, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
2:9 ဒီအတွက်ကြောင့်, ငါသည်လည်းသင်တို့ယုတ်မာသောလုပ်နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်မှယုတျညံ့ခဲ့ကြ, သငျသညျငါ၏လမ်းများကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပြီမဟုတ်သကဲ့သို့, နှင့်ပညတ်တရားကိုသင်တို့အားတစ်ဦးမျက်နှာကိုလက်ခံကြပြီ.
2:10 ငါတို့အပေါင်းတွင်တဦးတည်းအဘခမည်းတော်မရှိ? ဘုရားသခင်တဆူတည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖန်တီးသည်မဟုတ်? အဘယ်ကြောင့်, ထို့နောက်, ကျွန်တော်တို့ကိုအသီးအသီးမိမိညီအစ်ကိုကိုမထီမဲ့မြင်မပြုပါဘူး, ငါတို့ဘိုးဘေးများ၏ပဋိညာဉ်တရားကိုချိုးဖောက်?
2:11 ယုဒအမျိုးကိုလွန်ကျူးထားပါတယ်, နှင့်ရွံ့ရှာဘွယ်အဣသရေလအမျိုး၌ယေရုရှလင်မြို့၌ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး. ယုဒအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏သန့်ရှင်းစေသောညစ်ညမ်းပြီ, ပေးသောသူကိုခစျြ, နှင့်အခြားတပါးသောဘုရား၏သမီးကျင်းပခဲ့ပါသည်.
2:12 သခင်ဘုရားသည်ဤအမှုကိုစီရင်သောသူသည်ပယ်ရှားနှင်ထုတ်မည်, ဆရာနှင့်တပည့်နှစ်ဦးစလုံး, ယာကုပ်အမျိုး၏တဲနှင့်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားအားပူဇော်သက္ကာရှိသူများအနေဖြင့်.
2:13 တဖန်သင်တို့ထပ်တလဲလဲဤအမှုကိုပြုသော: သငျသညျကိုမျက်ရည်နှင့်တကွသခင်ဘုရား၏အဘို့ယဇ်ပလ္လင်ကိုဖုံးလွှမ်းကြပါပြီ, ငိုကြွေးဖိုနှင့်အတူ, ငါမဟုတ်တော့ဟာယယဇ်အဆီသို့ဦးတည်လေးစားမှုရှိသည်ထိုကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာအထိ, မဟုတ်ငါသည်သင်တို့၏လက်မှကြောင်းဆိုချော့မြှူကိုလက်မခံကြဘူး.
2:14 တဖန်သင်တို့ပြောဆိုကြပြီ, "ဘာဒီအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်?သခင်ဘုရားသည်သင်နှင့်သင့်လူငယ်၏မယားစပ်ကြားမှာသက်သေခံခဲ့သောကွောငျ့ "ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, သငျသညျမထီမဲ့မွငျပွုပါပွီဘယ်သူကို. သို့သျောလညျးသူသည်သင်၏မိတ်ဖက်ခဲ့, နှင့်သင့်သောပဋိညာဉ်တရား၏ဇနီး.
2:15 တစ်ဦးကသူမ၏လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး, သူသည်သူ၏စိတ်ဝိညာဉ်၏ကျန်ရှိသောမဟုတ်ပါဘူး? တဦးတယောက်တည်းအဘယ်အရာကိုရှာအံ့သောငှါထားဘူး, ဘုရားသခငျ၏သားစဉ်မြေးဆက် မှလွဲ.? သို့ဖြစ်., သင်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုထိန်းသိမ်း, နှင့်သင့်လူငယ်၏မယားခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်မပြုပါ.
2:16 သငျသညျမုန်းတီးမှုကိုင်ထားမယ်ဆိုရင်, သူမ၏ပယ်ချ, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်. သို့သော်ဒုစရိုကျသူလည်းမိမိအဝတ်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏. သင်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုထိန်းသိမ်း, နှင့်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ပါဘူး.
2:17 သင်သည်သင်၏မိန့်ခွန်းနှင့်တကွသခင်ဘုရားညှဉ်းဆဲဘူး, သငျတို့သပြောဆိုကြပြီ, "ဘယ်လိုနည်းနဲ့, ငါတို့သည်သူ့ကိုအပင်ပန်းလှပြီပါပြီ?"အဲဒီခုနှစ်တွင်သင်ပြော, "ဘေးဥပဒ်ကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကောင်းသောဖြစ်ပါသည်, ဤသူ့ကိုစိတ်တော်ကဲ့သို့သော,"သို့မဟုတ်ဆက်ဆက်, "ဘယ်မှာတရားသောဘုရားသခင်ဖြစ်?"
3:1 အကယ်, ငါသည်ငါ၏ကောင်းကင်တမန်ပေးပို့, သူကငါ့မျက်နှာကိုရှေ့တော်၌ထိုလမ်းလုပ်မည်. ထိုအခါလက်ရှိအရှင်, သငျသညျရှာသော, နှင့်သက်သေခံချက်ကောင်းကင်တမန်, အဘယ်သူကိုသင်အလိုရှိသော, ဗိမာန်တော်မှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်. အကယ်, သူချဉ်းကပ်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
3:2 အဘယ်သူသည်မိမိထွန်း၏နေ့ကိုစဉ်းစားနိုင်လိမ့်မည်, အဘယ်သူသည်ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီရပ်နေမည်? သူသည်တစ်ဦးသန့်စင်မီးနှင့်တူ၏, နှင့်ခဝါသည်ရဲ့မြက်ပင်ကဲ့သို့.
3:3 ထိုမင်းသည်သန့်စင်ထိုင်နှင့်ငွေကိုစင်ကြယ်စေလိမ့်မည်, သူကလေဝိသားနှုတ်ပယ်မည်, သူကရွှေနှင့်တူ, ငွေကဲ့သို့သူတို့ကိုငါစုဝေးစေမည်, သူတို့ကတရားမျှတမှုကိုအတွက်ထာဝရဘုရားအားယဇျပူဇျောပါမညျ.
3:4 ထိုအခါယုဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားပူဇော်သောယဇ်ကိုသခင်စိတ်တော်လိမ့်မည်, ကိုယ့်အတိတ်အစဉ်အဆက်ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, နှင့်ရှေးဟောင်းအနှစ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့.
3:5 ထိုအခါငါစီရင်တော်မူခြင်း၌သင်တို့အနီးသို့ချဉ်းကပ်မည်, ငါမတရားသောဆန့်ကျင်လျင်မြန်သောသကျသခေံဖွစျလိမျ့မညျ, နှင့်သူ့မယားကိုပြစ်မှားသော, နှင့် perjurers, နှင့်သူ၏လုပ်ခလစာအတွက်ငှားရမ်းထားလက်ခိုးသောသူတို့အား, မုတ်ဆိုးမတို့ကိုနှင့်မိဘမဲ့, သူခရီးသည်မညှဉ်းဆဲ, အဘယ်သူသည်ငါ့ကိုကြောက်ရွံကြပြီမဟုတ်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
3:6 အကြောင်းမူကားငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို, ငါမပြောင်းပါ. ပြီးတော့သင်, ယာကုပ်၏သားများ, ကိုလောင်ရကြပြီမဟုတ်.
3:7 အကြောင်းမူကား,, သင်တို့၏ဘိုးဘေးတို့လက်ထက်၌မှ, သငျသညျအကြှနျုပျ၏အထုံးမှဆုတ်ခွာခဲ့ကြပြီးသူတို့ကိုမစောင့်ကြပြီ. ငါ့ထံသို့ပြန်လာ, သင်တို့ကိုငါမှပြန်လာကြလိမ့်မည်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏. တဖန်သင်တို့ပြောဆိုကြပြီ, "ဘယ်လိုနည်းနဲ့, ကျွန်တော်တို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်?"
3:8 တစ်ဦးလူသည်ဘုရားသခင်၏ကိုညှဉ်းဆဲလျှင်, ထို့နောက်သငျသညျကိုအလွန်အကြှနျုပျကိုညှဉျးဆဲ. တဖန်သင်တို့ပြောဆိုကြပြီ, "ဘယ်လိုနည်းနဲ့, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုညှဉ်းဆဲဘူး?"ဆယ်ဘို့တဘို့ခုနှစ်တွင်နှင့်ဦးပထမဦးဆုံးအသီးကိုသီးထဲမှာ.
3:9 တဖန်သင်တို့ကိုပုဂ္ဂလိကနှင့်အတူမင်္ဂလာဖြစ်စေပြီ, သငျတို့သညျအလှနျအကြှနျုပျကိုညှဉျးဆဲ, ပင်ကိုသင့်တစျခုလုံးကိုကလူ.
3:10 ထိုစပါးကျီထဲသို့အပေါငျးတို့ဆယ်ဘို့တဘို့ကိုယူခဲ့, နှင့်အစားအစာအကြှနျုပျ၏အိမျ၌ရှိကြစေ. နှင့်ဤအကြောင်းကိုငါ့ကိုစမ်းသပ်ရန်, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, သင်တို့အားငါကောင်းကင်ဘုံ၏ floodgates ဖွင့်လှစ်မည်မဟုတ်ဖြစ်စေရန်အဖြစ်, သငျတို့သမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာသွန်းလောင်း, များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်လမ်း.
3:11 ထိုအခါငါသင်တို့ကို ထောက်. အကိုက်စားဆုံးမပါလိမ့်မယ်, သူကသင်၏မြေအသီးကိုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုမ. မတည်မသည်လယ်ပြင်၌စပျစ်ပင်မြုံဖြစ်လိမ့်မည်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
3:12 ထိုအခါခပ်သိမ်းသောလူမျိုးသင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏မခေါ်ပါလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးနှစျလိုဖှယျမြေယာဖြစ်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကား, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
3:13 သင်၏စကားသည်ငါ့အစွမ်းသတ္တိကိုကျော်သိမ်းယူပြီ, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
3:14 တဖန်သင်တို့ပြောဆိုကြပြီ, "ငါတို့သည်သင်တို့တဘက်၌အဘယ်သို့မိန့်တော်မူပြီ?"သင်ပြောဆိုကြပြီ, "သူကဘုရားသခငျသညျလုပျကြှေးသောသူသည်အချည်းနှီးကြိုးစားအားထုတ်အတွက်,"နှင့်, "ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူ့ဥပဒသေမြားကိုသိုထားပြီဟုအဘယျသို့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်, ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်၏သခင်၏ရှေ့တော်၌အ sorrowfully လမ်းလျှောက်ပြီ?
3:15 ထို့ကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ဟာအခုဆိုရင်မာနထောင်လွှားမင်္ဂလာမခေါ်, impiety အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေကိုဆောကျခဲ့ကြလျှင်အဖြစ်, လျှင်အဖြစ်ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံပြီကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ "
3:16 ထိုအခါသူတို့သည်သခင်ဘုရားမိန့်တော်မူကြောက်ရွံ့သေ​​ာ, မိမိအိမ်နီးချင်းနှင့်အတူအသီးအသီး. ထိုအခါသခင်ဘုရားအာရုံကိုပေးဆောင်ခြင်းနှင့်လိုက်နာ. နှင့်ကိုအောကျမေ့တဲ့စာအုပ်ရှေ့တော်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သည်, သခင်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သေ​​ာသူတို့အဘို့နှင့်သူ၏နာမကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသူများအတွက်.
3:17 သူတို့သည်ငါ၏အထူးအမွေခံရလိမ့်မည်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏, ငါအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်သောနေ့၌. ထိုအခါငါကသူတို့ကိုနှမြောမည်ဟုကောင်းကင်, တစ်ဦးသောသူသညျလုပျကြှေးသောသူသည်မိမိသားမသုံးသောသကဲ့သို့.
3:18 တဖန်သင်တို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်, သင်ရုံနှင့်မတရားသောသူတို့အတွက်အကြားခြားနားချက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်, နှင့်ဘုရားသခင်အစေခံသောသူတို့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ကြဘူးတဲ့သူတွေအကြား.
4:1 အကြောင်းမူကား,, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, နေ့ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်, တစ်ဦးမီးဖိုကဲ့သို့အမျက်မီးရှို့သ, လူအပေါင်းတို့သည်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့် impiously ပြုမူသောသူအပေါင်းတို့အမှိုက်ဖွစျလိမျ့မညျ. ထိုချဉ်းကပ်နေ့၌သူတို့ကိုလွန်စေလိမ့်မည်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏; ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမဟုတ်အမြစ်သည်အနောက်တွင်ချန်ထားမည်, မဟုတ်အညွန့်.
4:2 သို့သော်ထံသို့သငျသညျ, ငါ့နာမကိုကွောကျရှံ့သော, တရားမျှတမှု၏ Sun ကထတော်မူမည်, နှင့်ကျန်းမာရေးသည်မိမိအတောင်တို့ဖွစျလိမျ့မညျ. တဖန်သင်တို့ထွက် သွား. နွား၏နွားသငယ်ကဲ့သို့ခုန်ကြလိမ့်မည်.
4:3 သင်သည်ထိုမတရားသောသူတို့အတွက်နင်းလိမ့်မယ်, သူတို့သည်သင်၏ခြေဘဝါးအောက်တွင်ပြာကိုဖွစျလိမျ့မညျစဉ်, ငါအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်သောနေ့၌, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
4:4 ငါ၏ကျွန်မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်းကိုသတိရပါ, ငါသည်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အဘို့ဟောရပျအပျေါသူ့ကိုမှာထားတော်မူ, အဆိုပါဥပဒသေမြားနှင့်တရားစီရင်ပိုင်.
4:5 အကယ်, ငါသည်သင်တို့ကိုဧလိယအားညျပရောဖကျကိုပို့ပါလိမ့်မယ်, ထာဝရဘုရား၏အကြီးနှင့်အကြောက်မက်ဘွယ်သောနေ့၏မရောက်မီ.
4:6 သူသည်ထိုအသားတို့အားဖြင့်ဘိုးဘေးများ၏နှလုံးလှည့်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်သူတို့၏ဘိုးဘေးတို့အားအမြိုးသားတို့၏စိတ်နှလုံး, ငါသည် လာ. ထိုဖွယ်ရာကိစ္စအားဖြင့်မြေကြီးကိုဒဏ်ခတ်ရသောအခွင့်မရှိ.